अमेरिकामा सुस्ताउँदै नेपाली कलाकार - विशेष - साप्ताहिक
अमेरिकामा सुस्ताउँदै नेपाली कलाकार
नेपाली रंगिन दुनियाबाट हार खाएर अमेरीकामा थुप्रिने कलाकारको सख्या वढ्दै गएको छ । विभिन्न कार्यक्रम, घुमघाम तथा पारिवारीक भेटघाटको वहानामा भिषा एप्लाई गर्ने र अमेरिका छिरेपछि गुमनाम हुने उनिहरुको चलन छ । तर त्यहाँ रहेका नेपाली कलाकारहरुले आफुहरु गुमनाम नभएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । कतिपयले वाध्यताले विदेश पसेको वताउँछन् । कतिले जहाँ पुगेपनि नेपाली कलाकै वरिपरी रहेको जवाफ दिएर पन्छिने गरेका छन् ।
आखिर अमेरीकामा पुगेका उनिहरु गर्छन् चाहि के ? नेपालमा बसेर उक्त प्रश्नको जवाफ सहजै पाउन मुस्कील पर्छ । तर, कतिपयले भन्छन्, ‘अमेरिका आउने पैसा कमाउनका लागी हो, कहिलेकाही फ्याट्टफुट्ट कार्यक्रममा देखिने वहाना मात्रै हो ।’ उक्त देशमा रहेका कलाकारहरुमध्ये धेरैले आफ्नो कामबारे जानकारी दिन चाहदैनन् । त्यहाँ के गर्नुहुन्छ भन्ने विषयमा प्रश्न गर्दा प्रायले दिने एउटै जवाफ हो, ‘यहा“ कुनै पनि कामलाई ठूला वा सानो मानिदैन । श्रमको सम्मान गर्ने संस्कार छ ।’
यहाँ रहेका सर्वसाधारण नेपालीले जे गर्छन्, कलाकारहरु पनि त्यही गर्छन्, एक कलाकार भन्छन्, ‘मेरो नाम त नखुलाउनुस्, तर यहाँ हामी कलाकार हौं भनेर कसैले चिन्नेवाला छैन, सामान्य जे काम पाइन्छ त्यही नै गर्नेहो ।’ उनी यो पनि थप्छन्, ‘नेपालको स्टारडम यहाँ कसैले चिन्दैन ।’
अभिनेता मुकेश ढकाल भन्छन्, ‘जन्मभुमीमा बस्ने कसलाई रहर हुदैन ? यो सवै समय र परिस्थितीले भएको हो ।’ पैसाको अभावले त्यहाँ नगएको उनले खुलस्त पारे । देशको राजनिती अस्थिरताले कुनैपनी फिल्डमा काम गर्दा सुरक्षित अनुभुती भएन, राम्रो कहिले भएन, उनले भने, ‘सोही कारण यता आएको हुँ, कलाकारीतावाट पलायन भएको छैन ।’ उनले आफु कहिँ कतै जागिरमा व्यस्त रहेको बताए ।
अमिनेत्री रञ्जना शर्मा व्यवसायमा जमिसकेकी छिन् । ६ वर्षअघि अमेरिका हानिएकी उनी अहिले त्यहाँ ब्युटिपार्लर चलाएर बसेकी छिन् । केही समयअघि उनले सुरु गरेको पार्लरले पिकअप लिन थालेको धेरै भएको छैन । रञ्जना पुर्ण रुपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रवाट पाखा लागिसकेकी छिन् ।
अभिनेत्री ऋचा र निर्देशक शंकर घिमीरेको जोडीको अरु कलाकारको तुलनामा हाईफाई अलिकति वढि छ । पछिल्लो समय नेपालबाट गएका धेरै कलाकारहरु सुरुमा उनीहरुकै आतिथ्य पाउँछन् । केही दिन उनिहरुकै घरमा बस्दा अन्य केही कलाकारहरुपनि सोही घरमा आईपुग्छन् । रमाईला फोटो खिचेर फेसवुकमा पोस्ट गर्छन । ऋचा र शंकर अमेरिकामा जम्ने भाग्यमानी कलाकारमध्ये पर्छन् । तिन वच्चा भएकाले ऋचाले बाहिर काम गरेकी छैनन् । ऋचाले भनिन्, ‘म चार वर्षदेखी गृहिणी भएर बसेकी छु, ६६ बर्षिय मम्मी र तिन वच्चा छन् र श्रीमान हुनुहुन्छ ।’ उनका अनुसार श्रीमान शंकर विजनेश चलाएर बसेका छन् ।
निर्देशक श्याम भट्टराई अमेरिका हान्निएको २ वर्ष वढि भो । हाल यि निर्देशक चलचित्र निर्देशन गर्ने तयारीमा रहेको बताईन्छ । श्यामले आज मात्रै एउटा स्टाटस राखेका छन्, फेसवुकमा । चलचित्र क्षेत्रमा नयाँ पुस्ताहरू आउनु एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो । तर, नया पुस्ताले विल्कुलै नया कलाकारहरू लिएर चलचित्र वनाउँदा मात्रै मेरो चलचित्र नयाँ र ताजा हुन्छ भन्ने सोच वोकेर पुराना अभिनेता अभिनेत्रीहरूको अस्तित्व स्विकार्न नसक्नु चाही ठुलो भ्रम हो ।’ स्टाटसमा उनले उक्त भ्रमका कारण नै आजभोली पन्चानब्बे प्रतिशत चलचित्रकर्मीहरू असफलता व्योहोर्न बाध्य छन् । उनले स्टाटस मार्फत नयाँ र पुराना पुस्ताका कलाकारहरुलाई एउटै चलचित्रको केन्द्रिय भुमिकामा देखाएर दर्शकसम्म पुराउन आतुर रहेको समेत बताएका छन् । उनको यो स्टाटसले निर्देशक भट्टराई अमेरिकाको ग्रिन कार्ड लिएपनि नेपाली चलचित्र भने छोड्नेवाला नरहेको बताउँछ ।
अभिनेत्री अरुणिमा लम्साल श्रीमानसहित अमेरिका पुगेकी थिईन् तर केही समयअघि मात्रै उनिहरुको डिभोर्स भयो । उनले हाल घरमा छोरिको स्याहार सुसारमा ब्यस्त रहेको बताईएको छ । अभिनेत्री पुजा चन्दको वाल्टिमोरमा आफ्नै डिपार्टमेन्ट स्टोर छ । डिपार्टमेन्ट स्टोरबाट राम्रै कमाइ भैरहेको र ब्यवसायवाट उनी निकै खुसी छिन् ।
चर्चित लोकगायक प्रेमराजा महत वाल्टिमोरमा आफै रेष्टुरेन्ट खोलेका छन् । त्यहाँ पुगेपछि सुरुमा उनले रेष्टुरेन्टमा वेटर भएर काम गरेका थिए । केही वर्षपछि आफै रेष्टुरेन्ट खोलेका हुन् । यद्यपी अमेरिकामा बसेर नेपाली कला–संस्कृतिको प्रर्वदनको श्रेय उनलाई दिने गरिन्छ । उनले वाल्टिमोरमा केही रेष्टुरेन्ट रहेको त्यहाँ स्थित एक पत्रकारले हामीलाई जानकारी दिए । उनी नेपालवाट अमेरीकामा पुग्ने जो कसैलाई सहयोग गर्न हिचकिचाउँदैनन् । उनको सहयोगले धेरैको करिअर बनेको छ ।
लोक गायनकै क्षेत्रमा प्रसिद्धि कमाएका भगवान भण्डारी केही वर्षसम्म बाहिर जागिर गरे । अहिले आफ्नै व्यवसाय खोलेको बताइन्छ । सिकागोको एक रेष्टुरेन्टमा वेटरका रुपमा उनले तीन वर्ष काम गरेको अनुभव आफ्नै व्यवसायमा लगाएको स्रोतको भनाई छ । हाल बाल्टिमोरमा रहेका भगवान नेपाली लोक संगीत क्षेका निकै चर्चित गायक हुन् । उनि भन्छन्, ‘बिदेशमा बस्ने रहर कसलाई हुन्छ र ? तर यो सबै बाध्यता हो ।’ उनले विदेशमा बस्नुको कारण पैसा मात्रै नभएर सहज जिवीकोपार्जन तथा परिवारको भविष्यका लागी हो भन्छन् ।
यस्तैगरी गायीका सिला आले पनि अमेरिकामै छिन् । नेपालमा बसेर जे भनेपनि विदेशमा बस्नेहरु नेपालको बारेमा निकै चिन्तित हुने गरेको उनको भनाई छ ।
चर्चित गायक नरेन्द्र प्यासी ठ्याक्कै के गर्छन् खुलाएनन् । तर उनले अमेरिकामा परिवारलाई स्थापित गरिसकेका छन् । फ्याट्टफुट्ट नेपाल आउने, गित रेकर्ड गर्ने, केही कार्यक्रममा सहभागी हुने् मौका मिल्यो भने पुगिहाल्ने र विदेश फर्किहाल्छन् उनी । उनले भने, ‘हामी त्यहाँ स्थापित भैसकेका छौं, म नेपालमा जस्तै कार्यक्रमहरुमा पनि ब्यस्त भैराखेको हुन्छु ।’
अभिनेत्री उषा पौडेल त्यहाँ पुगेको धेरै वर्ष भयो । वलिउडमा जन्मे सोच अनुसार मुम्वई हान्निएपनि उनी त्यहाँ जम्न नसकेपछि अमेरिका पुगेकी हुन । उनले केही नेपाली चलचित्रवाट आफुलाई स्थापित गरिसकेकी थिईन । उषा, ऋचा र अरुणिमाको सम्वन्ध खुबै जमेको छ, विदेशमा पनी । उनीहरु बारम्बार गेट टुगेदर गर्छन ।
अभिनेता दिलीप रायमाझी केही वर्ष अघि मात्रै परिवारका सदस्यलाई लिएर अमेरीका गएका थिए । उनी केहि समय अघि चलचित्र लाई नभन्नु ल ५ को छायाँकनका लागी नेपाल आएका थिए । परिवारलाई अमेरिका सेटल गरिसकेपछि उनि पछिल्लो समय फ्याट्टफुट्ट नेपाल आउने गरेका छन् । चान्स पाएको खण्डमा उनले चलचित्रमा पनि काम गरिरहेका छन् । अमेरिका गएपनि फ्याट्टफुट्ट नेपाल आईरहन्छन् । उनले अमेरिकामा के गरिरहेका छन् भन्नेबारे बताउन चाहेनन् । रायमाझी ग्रिनकार्ड लिएर सपरिवार अमेरिका पुगेका हुन् । वुझीए अनुसार दिलीप परिवारका लागी अमेरिका गएपनि उनी नेपाल चलचत्रिमै काम गर्न चाहेका छन् ।
आधुनिक गायक यम बराल, सपना परियार, आईटम डान्सर निशा सुनार, नायिका युना उप्रेती, सज्जा मैनालीपनि अमेरीकामै छन् । यम वराल केही समय अघि मात्रै नेपाल आएर केही गित रेकर्ड गराएका थिए । उनले अमेरिकामा पनि साँगितीक कार्यक्रममै व्यस्त भएको बताए । यद्यपी यम भने आफु अमेरिका पलायन नभएको तर्क राख्छन् । उनि नेपाल र अमेरिका आउने जाने गरिरहेका छन् ।
हलिउड चलचित्र चलचित्र ‘हाईवे टु धुम्पुस’ को सुटिङका लागी भन्दै अमेरिका उडेका अभिनेता राजबल्लभ कोइराला त्यसपछि अमेरिकाबाट नेपाल आएर चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने सोच बनाएका छैनन् । २०७४ मा उनले जिवनसंगिनी समेत भित्राएका छन् । उनको पृष्ठभूमि अन्य कलाकारको भन्दा भिन्न छ । उनका बुबा, बहिनी लगायत परिवारका धेरै सदस्य उतै छन् । अमेरिकामा उनी आइटिको काम गर्ने गरेको बताइन्छ । नेपालमा रहँदा राम्रा चलचित्र अभिनय गरेको र त्यहाँ पुगेपछि हलिउडको प्रतिष्ठित ब्यानरमा काम गरेकाले पनि उनको लाईफस्टायल इज्जतदार रहेको एक चलचित्र निर्देशकले बताए ।
चर्चित नेपाली चलचित्रहरु अवतार, पराई, घर, ठूल्दाइ, घुम्टो लगायतमा नायिका वनेर वाह वाही कमाएकी अभिनेत्री जल शाह आफ्नो श्रीमान् सरत रिमाल र एक छोरीसँग सपनाको शहरमा रमाईरहेकी छिन् । उनी अमेरिका गएसँगै नेपाली चलचित्रवाट टाढा भईन् । त्यहाँ पुगेपछि जागिर खाईरहेपनि के कस्तो खालको जागिर हो भन्ने बारेमा पत्तो छैन ।
चर्चित गायिका सपनाश्री पनि उतै छिन । उनले वताए अनुसार पेसागत हिसाबले नेपालमै आत्मसन्तुष्टि भएपनी नेपालको डरत्रासको वातावरणले अमेरीका भासिनु परेको हो । उनले अमेरिकामा जागिर गर्दा रमाईलोनै भैरहेको बताईन् ।
गायक राजु लामा लामो समयदेखी अमेरिकामा छन् । उनी केही समय अघि मात्रै आफ्नो म्युजिकल व्याण्ड मंगोलीयन हार्टको २५ औं वर्ष सेलिव्रेसनका लागी नेपाल आएका थिए । उनले अमेरीकामा रहेपनी आफु गितसंगितमै व्यस्त रहेको बताए । उनले भने, ‘म विश्वका ६५ भन्दा वढि देश पुगेको छु, अमेरिकामा रहेपनी सांगितीक कार्यक्रममा व्यस्त छु ।’ बाकी के गर्छन् भन्ने विषयमा उनले खुलाएनन् ।
नायिका सारंगा श्रेष्ठ घरजम गरेर अमेरीकामै छिन् । उनी अमेरिकामा नृत्य कक्षा संचालन गर्दै आएकी छिन् । अभिनेत्री सज्जा मैनाली लामो समयदेखी अमेरिकामै छिन् । अर्कि अभिनेत्री कृष्टि मैनाली पनि धेरै वर्षदेखि अमेरीकामा छिन । अभिनेता सुधांसु जोशी अमेरीकामा डेभलपरको आईटीसम्वन्धी काममा व्यस्त छन् ।
गायक राम प्रसाद खनाल अमेरीकामा वस्छन् । कहिलेकाही गित वजारमा ल्याएपनी उनी त्यहाँ पनी विभिन्न कार्यक्रममा व्यस्त भैरहन्छन् । खनालको अध्यक्षतामा ‘अन्तराष्ट्रिय कलाकार मञ्च’ समेत गठन गरिएको थियो । यद्यपी उनले त्यहाँ के गर्छन् भन्ने विषयमा खुलाउन मानेनन् । केहि समय अघि नेपाल आएको समयमा उनले भनेका थिए, नेपालमा भविष्य राम्रो भयो भने फर्किन चाहन्छु ।
नेपालमा रहेका बेला सर्वाधिक म्युजिक भिडीयोको निर्देशन गरेर नाम र दाम कमाएका प्रशन्न पौडेल अमेरीकामा बस्न लागेको धेरै भैसक्यो । उनले अमेरिकामा फिल्म प्रोडक्सन हाउस खोलेको बताए । अमेरीकामा रहेर फिल्म निर्माणमा सक्रिय छु, उनले भनें, ‘अमेरीकामा रहेर विश्वको ध्यान तान्ने खालका चलचित्र वनाउने कोसिस जारी छ ।’ उनले केही समय अघि मात्रै नेपालमा आएर विहे गरेका छन् । म्युजिक भिडीयोवाहेक उनले आधा दर्जनको हाराहारीमा चलचित्र निर्माण गरेका छन् भने पछिल्लो चलचित्र कमलेको विहे रिलीजको तयारीमा छ । तर यो चलचित्र प्रदर्शन गर्ने कुरा धेरै पहिला भएको थियो, तर अहिलेसम्म केहि खवर बाहिर आएको छैन ।
निर्माता सुनिल रावलले श्रीमती र छोरीसहित अमेरिका वस्न लागेको ६ महिना जति भयो । सायद, होस्टेल, होस्टेल रिर्टन्स, सायद २ लगायतका फिल्म निर्माण गरेका उनको पछिल्लो चलचित्र लाउरे रिलीजको तयारीमा छ । तर स्रोतका अनुसार उनले यो चलचित्र अर्का निर्मातालाई बेचिसकेका छन् । रावल अब नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा काम नगर्ने बताइन्छ ।
कुनैबेला म्युजिक भिडीयोमा एकछत्र राज गरेका मोडल विमलेश अधिकारी पनी विदेशिएको धेरै भयो । उनी कहिलेकाही फ्याट्टफुट्ट नेपाल आएपनी कला क्षेत्रवाट लगभग गुमनाम जस्तै छन् । उनी अमेरिकामा के गर्छन् भन्ने नखुलाएपनी जागिरमा व्यस्त रहेको बताइन्छ ।
यस्तैगरी कलाकार हरिबहादुर थापा जीवन्त कलाकार हुन् । उनी अहिले धर्मपत्नीको साथमा अमेरिकाको न्युयोर्क सहरमा छन् । हरीवहादुरका अनुसार केही समय व्यक्तिगत कठिनाइले गर्दा अमेरिका पसेपनि भविष्यमा नेपाल नै गएर बस्ने योजना छ । यस्तै, हा“स्यकलाकार नारायण त्रिपाठी टेक्सास छन् । नेपाली धाराबाहिक हास्यँव्यङ्ग्य कार्यक्रम ट्वाक्कटुक्कबाट चर्चामा आएका उनले घरायसी समस्या सुल्झाउनकै लागी अमेरीका पसेको बताउँछन् । पप गायक श्रृजन ताम्राकार रिटेल स्टोरमा सेल्सम्यानको रुपमा काम गरिरहेका छन् । यद्यपी उनी नेपाली गितसंगितवाट वाहिर नरहेको बताउँछन् । गायीका सावित्री शाह लामो समयदेखी अमेरिकामा छिन् । यद्यपी उनी आफ्नै व्यवसाय चलाएर वसेको बताउँछिन ।
चर्चित गायक दिपेशकिशोर भट्टराईपनि यतिबेला अमेरिकामा छन् । काठमाडौं लाजिम्पाटमा जन्मेका उनी अमेरिकामा बस्न थालेको १० बर्षको हाराहारी भैसक्यो । त्यसो त कहिलेकाहि नेपाल आएर गीत रेकर्ड गराउने गरेका छन् । उनि भन्छन्, ‘म छोराका कारण अमेरिका गएको थिए, तर संगीत क्षेत्रको माया त लागिहाल्छ नी !' खासमा उनका १३ बर्षिय छोरा आयाम भट्टराई मस्तिष्क पक्षघातबाट पीडित थिए, उनैको भविश्यको लागि अमेरिका गएको उनको तर्क छ । उनि थप्छन्, ‘एउटा अभिभावक भैसकेपछि सन्तानको भविश्य महत्वपुर्ण हुन्छ, सन्तानको खुसी भन्दा माथी आफ्नो खुसी हुनै सक्दैन ।’ उनका दर्जनौं चर्चित गीत छन् । बर्षमा एउटा भएपनि गीत बजारमा ल्याउने प्रयास भने गरिरहेको उनको भनाई छ ।
यस्तैगरी नेपालमा रहंदा राम्रै चर्चा पाउने अभिनेत्री नन्दिता केसी पनि अमेरिका पसेको धेरै भयो । एक कार्यक्रमका लागी अमेरिका हान्निएकी उनि अहिले अमेरिकामा रहेर कहिलेकाहि कार्यक्रममा सहभागीता जनाउने गरेकी छिन् । उनले त्यहा“ के गर्छिन् भन्ने खुलाएकी छैनन् ।
यि कलाकारवाहेक नेपाली कलासँग कुनैवेला कहिँ कतै जोडिएका दर्जनौं कलाकारहरु अमेरिकाका विभिन्न शहरमा वस्छन् । केहि मिस नेपालहरु समेत अमेरिकामा छन् । उनिहरुमध्ये धेरैको चाहना अमेरिकाको ग्रिनकार्ड लिने र परिवारलाई विदेशमा व्यवस्थित गर्ने सोच छ । कतिपय कलाकारहरुले केही समय पैसा कमाएर नेपाल आउने समेत वताउँछन् ।
५ सय बढि कलाकारको ग्रिन कार्ड ?
नेपालको राजनिती, नैराश्यता, कला क्षेत्रबाट भनेजस्तो सफलता पाउन नसकेपछि अमेरिका पलायन हुने कलाकार बढेको बताइन्छ । हालसम्म ७ सयको हाराहारी नेपाली कलाकारले ग्रिन कार्ड लिएको बताइन्छ । तर अमेरिका कलाकार संघका अध्यक्ष सुमन वुढाका अनुसार हालसम्म ५ सय २ जना कलाकारले अमेरिकाको स्थायी आवास अनुमती पत्र लिइसकेका छन् । नेपाली कलाकारहरुलाई ग्रिन कार्डका लागी निकै सहज छ । अमेरिकी सरकारले कलाकारलाई एक्स्ट्रा अडिनरी आर्टिष्टको मान्यता दिने भएकाले उनिहरु उतै सम्मानित भएको महसुस समेत गर्ने गरेका छन् । यद्यपी जुनसुकै सम्मान पाएपनि अमेरिकामा नेपालमा जस्तो स्टारडम चल्दैन । कहिलेकाहि बिदाको दिन नेपाली समुदायले गरेका कार्यक्रममा पस्तुती दिएपनि अन्य दिन भने मज्जाले काम गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय नेपालबाटै अमेरिकी ग्रिन कार्डका लागी अप्लाई गर्न पाइने भएकाले दर्जनौं कलाकार यसको प्रोसेस गरिरहेका छन् । ५–७ लाख रकम खर्चिएपछि नेपालमै ग्रिन कार्ड आउने भएकाले भ्रर्खरै संघर्षरत कलाकारदेखी पाका कलाकारसम्मले ग्रिन कार्डको अप्लाई गर्ने गरेको पाइन्छ । अमेरिकामा रहेका विभिन्न वकिलहरुले काठमाण्डौंमा अफिस खोलेर उनिहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् । केहि एवार्ड, पत्रपत्रिकामा समाचार तथा अन्तरवार्ता, केहि कार्यक्रममा निर्णायक बसेको प्रमाण लगायत केहि थोरै डकुमेन्ट पेश गरेपछि पाइने ग्रिन कार्डको लोभमा दर्जनौं कलाकारले लाखौं रकम डुबाइरहेका छन् । नेपालमा नाम चलेका धेरै कलाकारले ग्रिन कार्ड बोकेर बसेका छन् ।
प्रकाशित :चैत्र १२, २०७५
नेपाली संगीतमा मौलिकताको अभाव भएकै हो त ?
गायक भिम श्रेष्ठको अक्सर छाता छुट्ने गर्छ
भूतको चलचित्रमा बेडसिन
हिन्दू मिथकमा संगीत असार ९, २०७६
नेपाली संगीतमा मौलिकताको अभाव भएकै हो त ? असार ८, २०७६
स्काउटले मानिसलाई मल्टिट्यालेन्ट बनाउँछ जेष्ठ २८, २०७६
नेपाल स्काउटको रोभर मुट जेष्ठ २६, २०७६
धूम्रपानले गाँजेको संसार जेष्ठ २०, २०७६
नेपालको इतिहासमा घटेका केही ठूला हत्याकाण्ड जेष्ठ १९, २०७६
दरबार रहस्यले घेरिएको थियो जेष्ठ १९, २०७६
बुद्ध दर्शनको पढाइ जेष्ठ १३, २०७६
वर्षका १२ सुन्दरी जेष्ठ ५, २०७६
आमा @ ट्विट वैशाख २१, २०७६